စံဝင်းချို Daily Hope It’s Time For Some Good News!
“သင်တို့သည် ငါ့ကိုအမှီပြု၍ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှါ ဤစကားကို ငါဟောပြောပြီ။ သင်တို့သည် လောက၌ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ငါသည် လောကကို အောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။” (ယော ၁၆း၃၃)
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က၊ အပြစ် ကမ္ဘာကြီးပေါ်သက်ရောက်မှုများကို ကျွန်တော် ဝေမျှခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာ သည်ကြမ်းတမ်းသည်၊ စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာသတင်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်က သင်ကို ချစ်အလွန်ချစ်သည်၊ ထိုကြောင့်သင်ကိုကယ်တင်ရန်၊ ကယ်တင်ရှင်စေလွှတ်ပေးသည်။
ယခုသင်တာဝန်ဖြစ်သည်၊ အပြစ်ကသင်၏အသက်တာကိုခက်ခဲစေလျှင်၊ သင်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အကြောင်းအရာ နှစ်ခုရှိသည်။
ပထမအချက်၊ သခင်ယေရှုကို အရှင်သခင်၊ နှင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသည်။ သင်၏ပြဿနာများကို၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနေဦးမည်လား? သင်တွင်ကယ်တင်ရှင် မလိုအပ်ဟုယူဆနေဦးမည်လား? အကယ်၍သာ၎င်းတို့သည်မှန်ကန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ရှင်တစ်ဦးစေလ္ဒတ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ယနေ့ကျမ်းချက်တွင်၊ သခင်ယေရှုက၊ “သင်တို့သည် ငါ့ကိုအမှီပြု၍ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှါ ဤစကားကို ငါဟောပြောပြီ။ သင်တို့သည် လောက၌ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ငါသည် လောကကို အောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။” (ယော ၁၆း၃၃)။ သူကသင်တွင် ပြဿနာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် ဟု မပြော၊ သူကသင်တွင်ပြဿနာရှိသည်ဟုပြောသည်။ သင်ရည်တွက်နိုင်ပေမည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့သည် ပျက်နေသောကမ္ဘာကြီးမှာနေကြရသည်၊ ဘယ်အရာမှတိတိကျကျမလုပ်ဆောင်ပါ။
ဒါပေမဲ့ သတင်းကောင်းသည် နောက်စာကြောင်းတွင်ပါလာသည်၊ “စိတ်နှလုံးတွင်သတ်မှတ်ပါ၊ ငါသည် ကမ္ဘာကြီးကိုချိုးနှိမ်နိုင်သည်။” သခင်ယေရှုသည်၊ သင်ကိုယ်တိုင်မဆောင်ရွက်သည်များကို ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။ သင်၏အသက်တာတွင်လိုအပ်နေသည်များကိုဖြည့်ပေးနိုင်သည်၊ နှင့် နေရာတိုင်းတွင်အပြည့်အ၀ ဖြည့်ပေးနိုင်သည်။
ဒုတိယအချက်၊ သခင်ယေရှု၏ အလင်းရောင်ကို သင်လိုက်ရန်လိုသည်။ သင်ဟာအမှောင်ထဲတွင် အလင်းရောင် လိုမည်၊ သင်သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဦးဆောင်လမ်းပြမှုကိုလိုမည်။ သခင်ယေရှုက “တဖန်တုံ ယေရှုက၊ ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည် မှောင်မိုက်၌ မသွားမလာ၊ အသက်၏အလင်းကို ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယော ၈း၁၂)
ဤအရာသည် လုံလောက်သည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သခင်ယေရှု၏အလင်းကိုလိုက်ရမည်။ ဤကမ္ဘာကြီးသည် တိုး၍တိုး၍ မှောင်လာသည်၊ နှင့်သင်သည်မှန်ကန်သော လမ်းပြသူလိုသည်၊ ကောင်းကင်၏အလင်းသို့ဦးဆောင် လမ်းပြပေးရန်။
သင်သည်သခင်ယေရှုကို အရှင်သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်မခံရသေးလျှင်၊ ကျွန်တော်မျှော်လင့်သည် မှာသင်သည်ခဏတာမျှ ဤဆုကိုတောင်းပါ
“သခင်ယေရှု ကျွန်တော်၏အပြစ်ကြောင့် စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်တော်၏ကယ်တင်ရှင် ကိုလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အသိတရားရပါသည်၊ ကျွန်တော်၏အသက်တာတွင်ရှိသောပြဿနာများကို လုံးဝကျွန်တော်မဖြေရှင်း နိုင်ပါ။ သူတို့ဟာနက်နဲသည်နှင့် အရိုးစွဲသောအရာများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အမှောင်ထဲတွင်ရှိသည်မှ သခင်ယေရှု၏အလင်းရောင်ကိုလိုက်နိုင်ရန်အကူအညီပေးပါ၊ ကျွန်တော်သည်ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားရမည် ကျွန်တော်၏အဆက်အသွယ်၊ ဘဏ္ဍာငွေ၊ အလုပ်၊ ကျန်းမာရေး။ ကျွန်တော်ကို သခင်ယေရှု၏မှန်ကန်သော အလင်းကိုမြင်နိုင်ရန် ကူညီပါ၊ ကျွန်တော်ကို ထာဝရဦးတည်ခေါ်ဆောင်သည်လမ်းကြောင်းကို ဦးဆောင်လမ်းပြ ပါ။ သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုအမှီပြု၍ဆုတောင်းပါသည်။ အာမင်။”
August 8, 2011 by Rick Warren